Akụkọ Bible: Eze Solomọn nke Maara Ihe - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
SOLOMỌN dị afọ iri na ụma mgbe e chiri ya eze. Ọ hụrụ Jehova n’anya, gbasookwa ezi ndụmọdụ nke Devid nna ya nyere ya. Jehova nwere mmasị n’ebe Solomọn nọ, n’ihi ya, ọ gwara ya ná nrọ otu abalị, sị: ‘Solomọn, gịnị ka ị ga-achọ ka m nye gị?’
Solomọn sịrị ya: ‘Jehova, Chineke m, abụ m nwata, amaghịkwa m otú e si achị ndị mmadụ. Biko nye m amamihe iji chịa ndị gị n’ụzọ ziri ezi.’
Jehova nwere obi ụtọ n’ihe Solomọn rịọrọ. O wee sị: ‘Ebe ọ bụ na ị rịọrọ amamihe kama ịrịọ ogologo ndụ na akụ̀, M ga-enye gị amamihe karịa onye ọ bụla dịworo ndụ. M ga-enyekwa gị ihe ị na-arịọghị, ma akụ̀ ma ebube.’
Ọ dịghị anya, ụmụ nwaanyị abụọ ewere esemokwu tara akpụ jekwuru Solomọn. Otu n’ime ha wee sị: ‘Mụ na nwaanyị a bi n’otu ụlọ. Amụrụ m nwa nwoke, mgbe ụbọchị abụọ gasịrị, ya amụọkwa nwa nwoke. O ruo n’otu abalị, nwa ya wee nwụọ. Mgbe m na-arahụ ụra, o nyiwere nwa ya nwụrụ anwụ n’akụkụ m, wee kuru nwa nke m. Mgbe m tetara wee lee nwa ahụ nwụrụ anwụ, ahụrụ m na ọ bụghị nke m.’
Mgbe o kwuru nke a, nwaanyị nke ọzọ sịrị: ‘Ee e! Nwa nke dị ndụ bụ nke m, nwa nwụrụ anwụ bụ nke ya!’ Nwaanyị mbụ wee sị: ‘Ee e! Nwa nwụrụ anwụ bụ nke gị, nwa nke dị ndụ bụ nke m!’ Otú a ka ha nọ na-arụrịta ụka. Ma gịnị ka Solomọn ga-eme?
O ziri ozi ka e weta mma agha, mgbe e wetara ya, ọ sị: ‘Gbubie nwa nke dị ndụ abụọ, nye nwaanyị nke ọ bụla ọkara ya.’
Onye nke bụ́ nne nwata ahụ n’ezie tiri mkpu, sị: ‘Ee e! Biko egbula ya. Were ya nye ya!’ Nwaanyị nke ọzọ wee sị: ‘Enyela onye ọ bụla n’ime anyị, Gbubie ya abụọ.’
N’ikpeazụ, Solomọn wee sị: ‘Egbula nwa ahụ! Were ya nye nwaanyị mbụ ahụ. Ọ bụ ya bụ nne ya n’ezie.’ Solomọn matara nke a n’ihi na onye bụ́ nne nwata ahụ n’ezie hụrụ ya n’anya nke ukwuu nke na ọ dị njikere ikwere ka e nye ya nwaanyị nke ọzọ ka a ghara igbu ya. Mgbe ndị Izrel nụrụ otú Solomọn si kpee ikpe ahụ, obi tọrọ ha ụtọ inwe eze maara ihe otú ahụ.
N’oge ọchịchị Solomọn, Chineke gọziri ndị Izrel site n’ime ka ala pupụta ọtụtụ wit na bali na grep na fig na ihe oriri ndị ọzọ. Ha na-eyi ezigbo uwe, na-ebikwa n’ụlọ ọma. Mmadụ niile nwere ezi ihe niile nke zuuru ha.
1 Ndị Eze 3:3-28; 4:29-34.
Gịnị ka Jehova jụrụ Solomọn, oleekwa otú o si zaghachi?
Gịnị ka Jehova kwere nkwa inye Solomọn ebe ọ bụ na arịrịọ Solomọn masịrị ya?
Nsogbu dị aṅaa tara akpụ ka ndị inyom abụọ wetaara Solomọn ka o dozie?
Dị ka ị pụrụ ịhụ na foto a, olee otú Solomọn si dozie nsogbu ahụ?
Olee otú ọchịchị Solomọn dị, ọ̀ bụkwa n’ihi gịnị ka o ji dị otú ahụ?
Gụọ 1 Ndị Eze 3:3-28
Olee ihe ndị ikom nwere ibu ọrụ ná nzukọ Chineke taa pụrụ ịmụta site n’okwu sitere n’obi nke Solomọn kwuru, bụ́ nke e dekọrọ ná 1 Ndị Eze 3:7? (Ọma 119:105; Ilu 3:5, 6)
Olee otú arịrịọ Solomọn si bụrụ ezi ihe atụ nke ihe anyị kwesịrị ịdị na-arịọ n’ekpere? (1 Eze 3:9, 11; Ilu 30:8, 9; 1 Jọn 5:14)
Obi ike dị aṅaa ka otú Solomọn si dozie esemokwu ahụ dị n’etiti ụmụ nwaanyị abụọ ahụ na-eme ka anyị nwee banyere ọchịchị nke Solomọn ahụ Ka Ukwuu, bụ́ Jizọs Kraịst, ga-achị n’ọdịnihu? (1 Eze 3:28; Aịsa. 9:6, 7; 11:2-4)
Gụọ 1 Ndị Eze 4:29-34.
Olee otú Jehova si zaa arịrịọ Solomọn rịọrọ maka obi na-erube isi? (1 Eze 4:29)
N’iburu n’uche mgbalị ndị mmadụ mere iji bịa nụrụ amamihe Solomọn, gịnị kwesịrị ịbụ àgwà anyị n’ebe ịmụ okwu Chineke dị? (1 Eze 4:29, 34; Jọn 17:3; 2 Tim. 3:16)
Chọpụta ihe na-adịghị na foto a, soro kpọm kpọm ndị dị na ya sechapụ ya, teekwa ya kreyọn.
Kaadị Akụkọ Sọlọmọn
Danloduo kaadị a ka ị matakwuo gbasara Sọlọmọn, Eze maara ihe.